Ekliziastis 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Na-eme ihe ọma mgbe niile (1-8)
Tụpụ achịcha gị n’elu mmiri (1)
Ghaa mkpụrụ malite n’ụtụtụ ruo ná mgbede (6)
Ṅụrịa ọṅụ n’oge ị na-eto eto (9, 10)
11 Tụpụ* achịcha gị n’elu mmiri,+ n’ihi na ị ga-ahụ ya ọzọ ma ọtụtụ ụbọchị gachaa.+ 2 Nye mmadụ asaa ma ọ bụ mmadụ asatọ ihe,+ n’ihi na ị maghị ọdachi ga-adakwasị ndị bi n’ụwa. 3 Ọ bụrụ na mmiri erujuo n’ígwé, ọ ga-ezosi ike n’ụwa. Ọ bụrụkwa na osisi adaa n’ebe ndịda ma ọ bụ n’ebe ugwu, osisi ahụ ga-atọgbọrọ n’ebe ọ dara. 4 Onye na-ele ifufe anya agaghị agha mkpụrụ, onye na-elekwa ígwé ojii anya agaghị ewe ihe ubi.+ 5 Otú ahụ ị na-amaghị otú ume ndụ* si arụ ọrụ n’ọkpụkpụ nwa e bu n’afọ,+ ka ị na-amaghị ọrụ ezi Chineke, onye na-eme ihe niile, na-arụ.+ 6 Ghaa mkpụrụ gị n’ụtụtụ, akwụsịkwala ịrụ ọrụ* ruo ná mgbede;+ n’ihi na ị maghị nke ga-eme nke ọma, ma ọ̀ bụ nke a ma ọ̀ bụ nke ọzọ ma ọ̀ bụkwanụ ma ha abụọ hà ga-emecha nke ọma. 7 Ìhè amaka, mmadụ ịhụ anyanwụ dịkwa mma. 8 Ọ bụrụ na ọ dabaara mmadụ ịdịte ndụ aka, ya kporiwe ndụ n’ụbọchị niile ọ dị ndụ.+ Ma ya chetakwa na ụbọchị ọchịchịrị ga-agba nwere ike ịdị ọtụtụ. Ihe niile ga-emecha mee bụ ihe efu.+ 9 Nwa okorobịa, ṅụrịa ọṅụ n’oge ị bụ okorobịa, nweekwa obi ụtọ n’oge ị na-eto eto. Mee ihe ndị dị gị n’obi, gaakwa ebe ọ bụla dị mma n’anya gị. Ma, mara na ezi Chineke ga-ekpe gị ikpe maka ihe niile a.+ 10 N’ihi ya, ihe ọ bụla ga-akpatara gị nsogbu, wepụ ya n’obi gị, wepụkwa ya n’ahụ́ gị, n’ihi na oge okorobịa na oge ike ka juru mmadụ n’ahụ́ bụ ihe efu.+
^ Ma ọ bụ “Zipụ.”
^ O nwekwara ike ịbụ mmụọ Chineke ka a na-ekwu.
^ Na Hibru, “ekwekwala ka aka gị zuo ike.”